Ny misiônera Mars mbola ratsy indrindra dia efa maty ankehitriny - BGR - TELEMAINA
HOME » SCIENCE Ny misiônera ratsy indrindra Mars dia efa maty ankehitriny - BGR
Ny misiônera ratsy indrindra Mars dia efa maty ankehitriny - BGR
TELES RELAY 12 Febroary 2019
Ny olombelona dia ho lasa na ho ela na ho any an-dalam-pandrefesana ho an'ny Mars, fa ny fananganana ny iraka voalohany ho an'ny olombelona eto amin'ny planeta iray hafa dia mazava ho azy fa asa sarotra sy lafo. Mars One dia iray amin'ireo ezaka goavana voalohany sy manahirana indrindra nananganana iraka ataon'ny olombelona tany Mars. Tena nahatsiravina tokoa izy io, tsy fahita firy, ary mety ho nisy hosoka mihitsy aza. Efa maty koa izy ankehitriny.
Mars One, mizara ho fiaraha-miombon'antoka fototra tsy ara-tsosialy sy orinasa mpandraharaha tsy miankina iray, dia nampiakatra dolara an-tapitrisa dolara avy amin'ireo mpampiasa vola be dia be mba hametraka fandaminana maharitra. Mars. Mazava ho azy fa tsy nandeha tsara ny zava-drehetra.
Ny vaovao momba ny fatiantoka ny orinasa, noraketin'i Reddit ary nahita azy Engadget dia toa manondro fa ny fikambanana manontolo dia tsy ampy ny famatsiam-bola. Ny fanambarana momba ny fatiantoka dia toa ny farany farany amin'ny vatam-paty ho an'ny ezaka ara-barotra nataon'ny Mars One sy ho an'ny iraka izay mbola zazakely.
Mahaliana ny mahamarika fa ireo rehetra ireo dia faharatsiana goavana hatrany am-piandohana, ary modely ara-barotra (raha afaka miantso izany ianao) dia nihomehy. Ny orinasa dia nandany vola ary nividy fahazoan-dàlana ho any amin'ny sampana tsy mitady tombombarotra rehefa niezaka ny hiditra an-tsehatra amin'ny Mars.
Teo am-piandohana, ny orinasa dia mikendry ny teti-bolan'ny 6 miliara mba hamela ny ekipa voalohany mpanafika marary efatra Mars, saingy tsy nahazo izany tarehimarika izany izy ireo. Na dia nahavita nanangona arivo tapitrisa 6 aza izy ireo, dia nanaiky ny ankamaroan'ireo manam-pahaizana fa tsy ampy ny vola hanatanterahana ny asa.
Ny tetik'asa dia tsy nahomby ary mety mahomby tanteraka. mampidi-doza raha toa araka ny itiavan'ny orinasa azy. Ny hevitra dia hoe nanao dia lavitra nankany Mars ny mpanamory sambondanitra, nametraka ny fiandohan'ny zanatany, ary niaina ny fiainany teo amin'ny planeta mena. Ny mpahay siansa dia nanala baraka hatrany am-piandohana, nilaza fa tsy naharitra ny drafitra ary mety ho faty ireo mpandeha raha toa ka mbola velona ihany.
Ity lahatsoratra ity dia niseho voalohany (amin'ny teny anglisy) BGR
Alao sary an-tsaina hoe eo amin'ny Mars ianao miaraka amin'ity lahatsary ity ao amin'ny 360 Degrees de Vera Rubin Ridge - BGR
Mety hanjavona tontolo iainana manerana izao tontolo izao ny fanjavonan'ny bibikely manerana izao tontolo izao - BGR
efaha amin'ny isam-2,178
OLONA SY FAHAFAHANA16,302
Lire la suite ...89
Firaisana sy fifandraisana96
Copyright © 2019 TELEVALA. All Rights Reserved.